Al-Shabaab oo dil toogasho ku fulisay nin lagu eedeeyay Basaasida Amiirada Shabaabka - Jowhar Somali Leader
Home Somali Al-Shabaab oo dil toogasho ku fulisay nin lagu eedeeyay Basaasida Amiirada Shabaabka
Al-Shabaab oo dil toogasho ku fulisay nin lagu eedeeyay Basaasida Amiirada Shabaabka
Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaalla degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ku fulisay xukun dil toogasho ah nin lagu soo eedeeyay inuu u basaasayay Sirdoonka Mareykanka.
Ninkan oo lagu magacaabo Yaasiin Maxamuud Cumar ayaa la sheegay inuu Maxkamadda ka hor qirtay in Sarkaal Mareykan ah oo jooga Xalane inuu u soo diray xogta iyo lambarada xubnaha sarsare ee Al-Shabaabka ku sugan Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegay in ninkan uu soo qaatay qandaraas uu ku keenayo macluumaad ku saabsan xubnaha Al-Shabaab ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, loona balan-qaaday lacago kumanaan dollar ah.
Sidoo kale Yaasiin ayaa la sheegay in Sarkaal ka tirsan Sirdoonka dowladda Federaalka inuu ku xiray Sarkaal Mareykan oo ka tirsan CIA-da kaasoo jooga Xarunta Xalane.
Dilkan ayaa ah kii u horeeyay oo nin lagu eedeeyay fal basaasnimo ah lagu fuliyo deegaan ka tirsna Shabeellaha Dhexe, iyadoo horay dilalka ceynkan oo kale Al-Shabaab dilalkan ka fulin jiray deegaanada Jubbooyinka.